एका–एक फेरिएको आचार्य गाउँको कथा - Hamrokhotang
Home » Baideshik » एका–एक फेरिएको आचार्य गाउँको कथा
एका–एक फेरिएको आचार्य गाउँको कथा
By: HamroKhotang.com on Thursday, June 07, 2018 /
खोटाङ जेठ–२४, उही आचार्य गाउँ । उही दिक्तेलबारी नोबे । उही ठाउँको जनजीवन केही बर्ष पनि होईन । केही महिना अघिको भन्दा अहिले बिल्कुल फरक पाईन्छ ।
खोटाङस्थित दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ का स्थानीय करिब एक बर्ष अघिसम्म तरकारी किन्न बजार जाने गर्थे । उही महिलाहरु अहिले तरकारी किन्न होईन बेच्न बजार जाने गर्छन् । जन्मजातै कुखुरा नछुने महिलाहरु ब्यवसायिक कुखुरापालन गर्छन् र आम्दानी बढाईरहेका छन् ।
घरको शोभाको लागि पशु चौपाय पाल्ने स्थानीय हाल आम्दानीमुलक र ब्यवसायिक हिसाबले पशुपालनमा लागेका छन् । कतिले ब्यवसायिक तरकारी खेति गरेका छन् त कतिले चट्पटे पसलदेखि किराना पसलसम्म शुरु गरेका छन् ।
हरेक जसो घरबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएको गाउँका केहीले भने ब्यवसायिक रुपमै खसीबाख्रा पालेका छन् । जे होस् सबैले आम्दानी बढाएका छन् । खर्च घटाएका छन् । सुरक्षित र सुखी जीवनको उपाय अपनाएका छन् ।
सदरमुकाम दिक्तेलबजार नजिकै रहेको उक्त गाउँ परिबर्तन भई सम्पन्नतातर्फ लाग्नुमा वित्तीय साक्षरता कक्षाको प्रभाब रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
बालसेवा समाज नेपाल नेर्पाले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी अन्तर्गत सञ्चालन गरेको कक्षाका सबै सहभागी एकै स्वरमा भन्छन्– ‘मिनप्रसाद सरलाई धेरै–धेरै धन्यबाद् ।’
मिनप्रसाद आचार्य उक्त वडामा सञ्चालित २८ हप्ते बित्तीय साक्षरता कक्षाको सहजकर्ता हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएको परिवारको बिप्रेषण प्रापक र सञ्चालकहरुबीच गरिने उक्त कक्षाका २४ जना सहभागीमध्ये सबैले आम्दानीमुलक ब्यवसाय शुरु गरिसकेका छन् ।
ब्यवसायिक कुखुरा पालनबाट राम्रो आम्दानी गरिरहनुभएको दीपा आचार्य भन्नुहुन्छ–‘हामी सबैले एउटा/एउटा बैंकमा नत्र २/३ वटा वित्तीय संस्थामा बचत गरेका छौं ।’
भएको पैसा थैलीमै बोक्ने महिलाहरु हाल दैनिक दुई सयदेखि एक हजारसम्म बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा बचत गर्छन् । आफ्नै घरधन्दामा लाग्ने महिलाहरु हाल मासिक रुपमा छलफलमा जुट्छन् र सामुहिक बिकास र आम्दानीको उपाय निकाल्न सरसल्लाह गर्छन् ।
उज्यालो अनुहार बनाउँदै दीपा थप्नुहुन्छ–‘हामीले सामुहिक केरा खेतिको लागि सबै तयारी गरिसकेका थियौं तर अन्त्यमा जग्गाको बारेमा कुरा मिलेन । ’
वैदेशिक रोजगारीमा गएको आफन्तको आशमा बस्ने स्थानीय अहिले आफ्नै आम्दानी बढाउँदै खर्च घटाउँछन् । अनि बिदेशबाट पठाएको रकम ? सजिलै साथ भन्छन्–‘त्यो चाँही बैंकमा जम्मा गर्छुम । आफुले कमाएको पनि खर्च कटाएर बचत पनि गरिन्छ ।’
एउटा भैंसी पाल्नेले अर्को भैंसी पनि थपेका छन् । पन्ध्र वटा बाख्रा पाल्नेले २५ वटा बनाएका छन् । सबैको घरगोठ हराभरा देखिन्छ । सबैको घु¥यानमा तरकारीको टनेला ।
‘पहिले परदेशीको आशामा बसिन्थ्यो अहिले आफ्नै आम्दानीले खर्च पु¥याएर बचत पनि गर्छौं ।’ महिलाहरु एकै स्वरमा भन्छन्–‘हामी सबैले आम्दानी र खर्चको बिबरण राख्ने गरेका छौं ।’ त्यसो गर्दा के हुन्छ ? यसरी जवाफ दिन्छन्–‘आम्दानी बढाउने र खर्च घटाउने उपाय निकालिन्छ अनि बिदेशमा बसेर पठाउनेलाई पनि हिसाब देखाएर मनमुटाव हुन दिईंदैन ।’
बच्चाको भबिश्यको लागि बचत तथा बिमा समेत गरिदिने अधिकांश महिलाहरु अब दीगो आम्दानीको बाटो समाएर श्रीमानलाई बिदेश नपठाई गाउँमै आयमुलक ब्यवसाय गर्ने दाउमा रहेका छन् ।
श्रीमान तथा घरपरिवारसँग सरसल्लाह गरेर खर्च गर्दा वा कुनै पनि काम गर्दा परिवारमा सुख आउने सोही स्थानका सरिता आचार्य बताउनुहुन्छ । श्रीमान मलेसियामा रहेको बताउनुहुने सरितालाई दुख बिमार पर्दा होस् या कुनै पनि कार्यको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचतलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ ।
हँसिला–रसिला देखिने महिलाहरुमा सबै भन्दा ठूलो परिबर्तन त यो आएको छ की जसमा आत्मबिश्वास बढेको छ । पहिले आफ्नो नाम भन्न नसक्ने महिलाहरु अहिले आफुले गरेको काम लगायत आफ्ना कुरा समुहमा होस् या ब्यक्तिगत रुपमा खुलस्त बनाउन सक्छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने ब्यक्ति नियमित रुपमा बिदेश नै बसिरहनु नपरोस् भन्ने ध्ययेले यस्तो कक्षा सत्तचालन गरिएको बालसेवा समाज नेपालको बिद्यालय तथा आम सञ्चार कार्यक्रम संयोजक ओजोनबाबु आचार्यले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई सही सदुपयोग गर्नुका साथै गाउँमै आम्दानी बढाउने उपायहरुका बारेमा उक्त कक्षामा छलफल गरिन्छ । रेमिट्यान्सको सही ब्यवस्थापन गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने वाताबरण बनाउनु नै यो कक्षाको उदेश्य रहेको संयोजक आचार्यको भनाई छ ।
नगरपालिकाको १, २ र ४ नम्बर वडामा गत असोजदेखि शुरु गरिएको कक्षाका सहभागीहरुले वित्तिय लक्ष्य अपनाउनका साथै ब्याबसायिक योजना शुरु गरेसँगै हालै कक्षाको समापन गरिएको छ ।
सहभागीहरुले जीवन विमा र वैदेशिक रोजगारीमा भएको व्याक्तिको महत्वपुर्ण कागजपत्र मगाउनका साथै दीगो आम्दानीको बाटो अपनाएको बित्तिय साक्षरता सहजकर्ताहरुले जनाएका छन् ।
यसैबीच, नगरको १५ स्थानमा सञ्चालन गरिएको बित्तीय साक्षरता कक्षापछिको अवस्था अनुगमन गरिएको छ । बिहिबार गरिएको अनुगमनमा स्थानीयले उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरी ब्यवहारिक जीवनमै परिबर्तन ल्याएको पाईएको नगर प्रमुख दिपनारायण रिजालले बताउनुभयो । अनुगमनको क्रममा उत्साहित र मेहनती समुह पाईएको भन्दै सामुहिक खेति लगायत सामुहिक हीतको लागि काम गर्ने सोंच बनाएको स्थानीयलाई नगरको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रमुख रिजालले जनाउनुभयो ।
बालसेवा समाजका अध्यक्ष चन्द्रकला भुजेल, जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन, पत्रकार लगायतको प्रतिनिधिमुलक सहभागितामा स्थलगत अध्ययन तथा छलफल गरिएको थियो ।